Wiil Soomaaliyeed oo ay naafeeyeen burcad Koonfur Afrikaan ah oo codsaday kaalmo caafimaad (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Cabdi Catoosh Faarax, waa wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah, da’diisuna waa 30, bishii May sanadkii 2012 ayaa koox burcad Koonfur Afrikaan ah ku dhaawaceen magaalada Capte Town ee dalkaas, waxaana magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyey isla sanadkii 2012. Cabdi wuxuu leeyahay xaas iyo labo caruur ah.
Isagoo xoogsanaya oo ka shaqeynaya dukaan yar ayaa burcaddu xabad kaga dhufteen dhabarka, wuxuu naafo ka noqday qeybta dambe ee jirkiisa, mana awoodo inuu lugihiisa ku istaago, mana ceshan karo kaadida iyo saxarada.
Cabdi waa nin saaran gaariga dadka cuuryaanka, mana heli karo dhaqaale uu isku daweeyo, waxaa dad Ahlukheyr ah ku dedaaleen iney ku daweeyaan isbitaallada gudaha, hase ahaatee waxaa Isbitaallada dhamaantood isku raaceen inaan gudaha dalka wax looga qaban karin, oo uu u baahan yahay Isbitaal debadda ah.
Haddaba, Cabdi Catoosh Faarax oo ku nool xaafadda Suuq Bacaad ee magaalada Mqudisho, wuxuu ka codsanayaa dowladda Federaalka Soomaaliya, hay’adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo dhamaan dadka kheyrka jecel ee Soomaaliyeed iney gacan ka geystaan sidii loogu qaadi lahaa isbitaal debadd ah oo xaaladiisa caafimaad wax ka qaban kara.
Waxaa la gala xiriir karaa Cabdi Catoosh Faarax Tel: 0615460468 ama 0615846446, 0699999154,0695576846
Fadlaan halkaan ka aqri warqaddii uu soo saaray Isbitaalkii ugu dambeeyey ee la tacaala xaaladiisa caafimaad, kaasoo ah Isbitaalka Masaarida ee magaalada Muqdisho.(Riix Warqadda si ay u weynaato)
Machad Mareykanka ah oo Kenya ooku eedeeyey iney Alshabaab ku gacan siino ganacsiga dhuxusha